Interview - Setopati | Setopati Kala - Nepal's Digital Newspaper
Search interview by date range:
गणेश पाण्डे, काठमाडौं, वैशाख १६ - गणेश पाण्डे मुलतः डकुमेन्ट्री निर्माता÷निर्देशक हुन्। भूकम्पसम्बन्धि डकुमेन्ट्री ‘भाग्यले बाँचेकाहरु’ हालै बेलायतको संसदमा प्रदर्शन भएको थियो। यो डकुमेन्ट्रीले करिब डेढ दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हात पारिसकेको छ। यही डकुमेन्ट्रीको सेरोफेरोमा रहेर सेतोपाटीका समुन्द्र राज घिमिरेले उनीसँग गरेको कुराकानीको अ‌ंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।
रामनाथ खनाल 'अक्षर काका' - पढ्न भनेर सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौं झरेको। बाटामा आउँदै गर्दा कान्तिपुरको अघिल्लो पानामा आँखा पुग्यो। कान्तिपुरको कुनचाहिँ पानामा हो, एउटा हृदयविदारक तस्बिर रहेछ– हराएको ३० वर्षपछि लोग्ने भेटियो। जिउँदो होइन मरेको! महिला नदीका किनारमा गालामा हात लगाएर बसेको कारुणिक तस्बिर छापिएको थियो। जतिबेलै पनि त्यही तस्बिर दिमागमा पुतलीझैँ नाचिरहने! नलेखी सुखै पाइनँ।
आफ्नै बुतामा परिचय बनाउने धुन
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, वैशाख ६ - निश्चल बस्नेत र उनको सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ। दुवैले एक–अर्कालाई सल्लाह–सुझावसम्म दिन्छन्, तर निर्णय गर्ने अधिकार आफूमै सुरक्षित राखेका छन्। कस्तो फिल्ममा अभिनय गर्ने, कस्ता फिल्मकर्मीसँग काम गर्ने भन्ने कुरामा उनी निश्चलसँग सल्लाह लिन्नन्। निश्चलले पनि ‘यसो गर, उसो गर’ भनेर प्रत्यक्ष रुपमा सल्लाह दिएका छैनन्। अहिलेसम्म यत्ति भनेका रहेछन्, ‘स्क्रिनमा दुब्ली देखियौ। अलि मोटाउन!’
तीनवटा उपन्यास लेखिसकें, जहाँको तहीँ!
ओहो! ह्याट्रिक गरिसकेँ है? हाहा...! तर, तीनवटा उपन्यास आइसक्यो जहाँको तहीँ! मसँग भएको कमजोरीले नै जहाँको तहीँ राखेको होला, नभए एउटै उपन्यासले पनि कसैलाई सेलिब्रेटी बनाइदिएको छ। भाषामा लालित्य भर्न जान्दिनँ, बिम्बहरु पनि कमै हुन्छ, बिकाउ विषयवस्तुतिर जाँदिनँ। फटाफट र सिधा भन्ने बानी छ लेखनमा, सायद यही कमजारी हो कि!
'लीलाबोधले तपाईंलाई सहिष्णु बनाउँछ'
काठमाडौं, चैत २६ - साहित्यकार कृष्ण धरावासी आफ्नो २७ औं पुस्तक 'लीलाबोध' लिएर आएका छन्। 'झोला' कथा र 'शरणार्थी' तथा 'राधा' जस्ता चर्चित उपन्याका लेखक धरावासीको यो पुस्तक दर्शन र सिद्धान्तको पुस्तक हो। यसमा उनले लीलालेखनको सैद्धान्तिक मतलाई व्याख्या गरेका छन्। भर्खरै सार्वजनिक भएको उनको 'लीलाबोध'बारे सेतोपाटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।
अब कसैले चाहेर पनि गजलको विकास रोक्न सक्दैन
ज्ञानुवाकर पौडेल - गजलका बारेमा जसले जति नकारात्मक र अप्रिय टिप्पणी गरे पनि गजल लेखिन छाडिएको छैन। झन्–झन् राम्रो गजल देखिन थालिएको छ। कैफियत जस्तो संग्रह देखिन थालिसकेको छ। साथै नराम्रा किताब पनि निस्केकै छन्। त्यही नराम्रो धेरै किताब देखेर नराम्रा टिप्पणी गर्छन् यसमा टाउको दुखाउनु जरुरी छैन। अरु विधामा पनि त राम्रो भन्दा नराम्रो लेख्नेको संख्या धेरै छन् नि, हैन र?
समुन्द्र राज घिमिरे, काठमाडौं, फागुन ३० - आफ्नो आवाजमा समग्र महिलाको आवाज मुखरित गर्ने प्रयास गरिरहेकी अभया सुब्बा आफ्नो दाम्पत्य जीवनबारे यसो भन्छिन्, ‘हामी दुवै कलाकार हौं। एकले अर्कासँग सिक्न पाइरहेका छौं। मेरो श्रीमानले मलाई छुट दिए भन्न खोजेको होइन। उनी पनि मैले छुट दिएँ भनेर जस लिँदैनन्। पुरुषले मैले छुट दिएको छु भन्नु ‘पुरुष नै शक्तिसम्पन्न हो’ भन्नु नै त हो।’
समुन्द्र राज घिमिरे , काठमाडौं, फागुन १३ - पुतलीसडकको एक क्याफेमा गत बुधबार राति केही फिल्मकर्मी भेला भएका थिए। क्याफेको सिसाबाहिर सहरका भित्तामा ‘लुट २’ का पोस्टरले कब्जा जमाएको देखिन्थ्यो। जब–जब लुटको कुरा उठ्छ, निश्चलको चर्चा चल्छ। अहिले त यो स्वाभाविक पनि छ। लुट २ रिलिजकै छेकोमा निश्चलले गाएको र नाचेको ‘काले दाइ’ हिट भइरहेछ। ‘लप्पन छप्पन’ फिल्मका लागि निश्चलले नै गाएको ‘पोको पारेर’ भर्खर रिलिज भयो, जुन केही घन्टामै ४० हजारपटक हेरिएको थियो।
झन्डै निभेको दियो
समुन्द्र राज घिमिरे, काठमाडौं, माघ २८ - फिल्मले मान्छेको दुःखको कथा त भन्छ तर आफ्नै कथा भन्दैन! फिल्मसँग आफैं बोल्ने सामथ्र्य हुन्थ्यो भने भन्थ्यो होला, मेरो स्वभाव चुपचाप बस्ने होइन। बोल्ने हो। मलाई यहाँबाट बाहिर निकाल र मैले भन्ने कथा सबैलाई सुनाइदेऊ! तर, सुनिदिने कसले? फिल्म बनाउने मान्छे नै दुःखान्त कथामा अल्झिएको छ!
समुन्द्र राज घिमिरे, काठमाडौं, माघ २३ - ‘ड्रिम्स’ र ‘गाजलु’ पछि अनमोलले नयाँ फिल्म ‘कृ’ का लागि २० लाख पारिश्रमिक लिएका छन्। पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा उनको ताजा अनुहार भने उति देखिएको छैन। भन्छन्, ‘मेरो कोठा नै संसार, संसार नै कोठा। यहाँ म आफूलाई मन लागेको गर्न पाउँछु। यहीँभित्र मलाई चाहिने सोचहरू बनिरहेका हुन्छन्। यहीँभित्र मेरो विकास भइरहेको पाउँछु।’
समुन्द्र राज घिमिरे, काठमाडौं, माघ ८ - नवविवाहित जोडीलाई घुम्ने जत्तिको उत्साह अरू केले दिन्थ्यो र? तर, एक्कासि गायक यम बुद्धको आत्महत्याको खबर सुन्नुपर्यो। कुनै समय गायनमै करिअर बनाउन भौंतारिएका निश्चल र अनेक हण्डर खाँदै ¥यापमा सफल बनेका यमबुद्धबीच दाइ–भाइको सम्बन्ध थियो। अझ आफैंले भर्खरै ¥याप गाएका थिए। त्यो ¥यापमा लाहुरे, यमबुद्ध लगायतको नाम पनि थियो। निश्चलले फेसबुकमा भनेका थिए, ‘भाइ मेरो ¥यापमा तिम्रो नाम पनि हालेको छु है। काठमाडौं आएका बेला सुन्नुपर्छ।’ ‘हाहाहा... दाइले हाम्लाई उडाउनुभा’ होला,’ यमबुद्धले लेखेका थिए।
समुन्द्र राज घिमिरे, काठमाडौं, पुस २८ - खरो समीक्षकको परिचय बनिसकेको व्यक्तिलाई अरुको तुलनामा बढी नै प्रहार हुन सक्छ। उनको यसअघिको समीक्षकको बलियो परिचयमाथि नै चुनौति हुने त होइन? फिल्म लेख्दा मात्रै त गाली खाइसकेका उनी अहिले झन् ‘डेन्जर जोन’ मा छन्। ‘पहिले म लेखनबाट आफूलाई लागेको कुरा पोख्थेँ,’ दीपेन्द्र लामा भन्छन्, ‘अहिले आफूले भन्नुपर्ने कुरा दृश्यमा आएको छ। व्यापारिक हिसाबले जस्तोसुकै भए पनि मैले मेरो समाजको कुरा बोलेको छु भनेर सन्तुष्ट हुनेछु।’
शान्ति ठटालले सम्हालेर राखेका यादहरू
समुन्द्र राज घिमिरे, दार्जीलिङ, पुस २२ - अनुहारभरि कान्ति छरिए पनि शरीरले साथ दिन छाडेछ। कारबाट ओर्लंदा अर्काको भर चाहिएको उनलाई बस्ने आसनसम्म अरूले नै डोर्याइदिए। तर, जब शान्ति बोल्न थालिन्, कार्यक्रम हलमा सियो खसेको छिसिक्क आवाजधरि सुनिने शान्ति छायो। ओजिलो आवाजमा उत्तिकै ओजिलो अभिव्यक्ति दिने उनलाई आफ्नो सांगीतिक यात्राका स–साना घटना पनि यस्तरी याद रहेछन्, मानौं ती हिजै मात्र भएका हुन्।
राजिन पनेरु - हिजो घुँडा फाटेको सुरुवाल, फाटेको भोटो लगाएर कयन हण्डर खाएर हिँडेको जिन्दगी आज त कम्तिमा पनि नफाटेको सुरुवाल–कपडा लगाएर हिँड्न पाएको त छु। यति भए पुग्यो। मरेर लैजानु केही छैन। फलाना म¥यो भन्छन्। पाउने भनेको मलामी न हो। अन्त्यमा... मेरो एउटै इच्छा छ, बाँचुञ्जेल धेरै बिरामी भएर नबाँचूँ। नाटक खेल्दा–खेल्दै मर्न पाऊँ!
भिजा गर्ल'बाट निर्देशन सुरू गरेका प्रचण्डको दोस्रो फिल्म 'लभ सासा' आगामी साता नेपाली हलहरूमा लाग्दैछ। उनी आफ्नो फिल्म र कामलाई लिएर स्पष्ट छन्। भन्छन, 'मेरो फिल्ममा बैक पनि लुटिदैन, किडनी पनि बेचिदैन। त्यस्तो भयंकर कुरा हुन्नन्। म मानिसका जीवनका एक समयका कथा भन्छु। मलाई त्यस्तै फिल्म बनाउन मनपर्छ। म मानिसका जीवनका १ वर्ष, केही दिन वा हप्ताका कथालाई रोचक ढंगले भन्न रूचाउँछु। 'लभ सासा' त्यस्तै फिल्म हो।'
यहाँ एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। इन्द्रबहादुर राई (उनकै शब्दमा) एकताका रातोभन्दा रातो कम्युनिष्ट थिए। तर सन् १९६२ अक्टुबरमा छिमेकी र मित्रराष्ट्र कम्युनिष्ट चीनको आफ्नो भारतभूमिमाथिको आक्रमण लगत्तै उनले कम्युनिष्ट राजनीति परित्याग गरेका थिए। … मैले मातेको मान्छे बिम्बका रूपमा रोजेको चाहीँ हाम्रो नेपाली समाजमा प्रचलित भनाई 'मातेको मान्छेले त साँचो कुरा खुस्काउँछ है अर्थात् ढाँट्दैन हुँ' भन्ने लोककथनलाई विश्वाश गरेर हो। अर्को कुरा रक्सीलाई मादक पदार्थ मात्र नभएर चेतनाको प्रतीकका रूपमा लिएर लेखेको हो।
राजनराज शिवाकोटी - शिवरात्रीको दिन, रेकर्डिङका लागि टुँडिखेलको बाटो भएर जाँदा सेनाको कार्यक्रममा सुर्केथैली बजिरहेको थियो। प्रधानसेनापतीलाई सुर्केथैली निकै मन पर्ने गीत रहेछ। त्यसले मलाई निकै ऊर्जा दिइरहेको थियो। रेकर्डिङ सकिँदासम्म मलाई खासै डर थिएन। चल्छ भन्ने विश्वास त थियो तर, अहिले जत्ति चल्ला भन्ने लागेको थिएन। सुर्केथैली एक करोड पुगेजस्तै यो पनि केही दिनमै एक करोड भ्युज पक्का पुग्छ। ... सुर्केथैली हिट भएपछि मैले के बुझेँ भने, एउटा गीत हिट हुनुको ठ्याक्कै कारण हुँदैन। शब्द, संगीत, एरेन्ज, स्वर सबै सशक्त भइकन पनि थुप्रै गीत छायाँमा परेका छन्। गीत हिट हुन भिडियोले पनि काम गर्छ। तर, मुल कारण भने यो मात्र होइन।
समुन्द्र राज घिमिरे, काठमाडौं, मंसिर २८ - जंगली जनावरै जनावरको घना बस्ती। अगाडिबाट आइरहेको अर्नाको बथानसँग सिंहको बथानको आँखा जुध्यो। अर्नाहरु फरक्क फर्किए। सिंह आफ्नै धुनमा बसिरह्यो। कारण, सिंह अघाएका रहेछन्। जीवाको परिवारलाई घुमाउने गाडी चालक भन्छन्, ‘मान्छे मात्र त्यस्तो प्राणी हो, जो कहिल्यै अघाउँदैन।’
'नेताहरु बढी बोल्छन्, उनीहरुको आवाजबाटै बिजुली निकाल्न पाए त!'
समुन्द्र राज घिमिरे, काठमाडौं, मंसिर १६ - यो फिल्मसँग दुईवटा संयोग जोडिएका छन्। पहिलो, जतिबेला फिल्मको टिजर रिलिज भयो, ‘हावाबाट बिजुली निकाल्ने’ कुरा चुलिएको थियो। अर्को, बिजुली अभाव र लोडसेडिङसँग जोडिएको यो फिल्म जतिबेला रिलिजको तर्खरमा छ, विद्युत प्राधिकरण काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गराउने अभियानमा लागेको छ।
१२ मसलाको जात्रा, १३ स्वादको जोडी
समुन्द्र राज घिमिरे, ललितपुर, मंसिर ५ - यतिबेला ‘जात्रा’ ले थोरै मात्र नौलो प्रचार शैली अपनाएर मधेसमा नेपाली फिल्मको सकारात्मक भविष्यतर्फ औंला देखाएको छ। यसको कारण हो, जनकपुरका चर्चित कलाकार रवीन्द्र झा र प्रियंका झाको जोडी। यी दुईलाई सबैभन्दा अगाडि राखिएको एउटा पोस्टर यतिबेला जनकपुरका भित्ता–भित्तामा टाँसिएको छ, जसको माथि मैथिली भाषामा उनीहरुको परिचय खुलाइएको छ। उनीहरुको छुट्टाछुट्टै सोलो पोस्टर पनि सार्वजनिक गरिएको छ। पोस्टरमा मधेसी मूलका कमै अभिनेता/अभिनेत्रीले यस्तो मौका पाएका छन्। नेपाली फिल्ममा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने बहस उत्कर्षमा रहेका बेला यो एक उत्साहजनक प्रयास हो।
समुन्द्र राज घिमिरे , काठमाडौं, कात्तिक २९ - अहिले त उनलाई क्यामराले नै बढी प्रेम गर्न थालेछ। कसरी भने, स्क्रिनमा देखिने र वास्तविक एलिसामा निकै भिन्नता पाइन्छ। ठमेल बजारमा याद गर्नुभयो होला, उनी निकै ‘बोल्ड’ लाग्छिन्। वास्तविकतामा उनको अनुहार बच्चाको जस्तो कलिलो लाग्छ। त्यसैले म्युजिक भिडियो निर्देशकहरु पहिलो भेटमा अपत्यारिलो भावमा भन्दा रहेछन्, ‘बच्चै रहेछ्यौ त। हामीलाई अलि बोल्ड क्यारेक्टर चाहिएको हो।’ जब क्यामरामा कैद भएर स्क्रिनमा देखिन्छिन्, पहिले यसो भन्ने निर्देशक छक्क पर्दै भन्दा रहेछन्, ‘बाफ रे!’
दर्शकको अगाडि प्रस्तुति दिनुको मज्जै बेग्लै
विवेक मिश्रा, कात्तिक १८, विराटनगर - म जहाँ जन्मिए, हुर्किए त्यसबेला कलाकारीता क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने सोचको भए अरु नामी कलाकारको नक्कल गर्न लाग्थे होला त्यो सपना पाल्नु त्यो ठाँउमा मुर्खता थियो। त्यसकारण म भित्र अभिनय गर्छु भन्ने कुनै लोभ भएन तर मनभित्र एउटा कुण्ठा थियो दबिएर बसेको तर अचानक अभिनय होईन नाटक लेख्छु, निदेशन गर्छु, व्याक स्टेजमा बसेर सेट बनाउछु भनेर गएको हो तर त्यसको लागि अनिर्वाय अभिनय नै गर्नुपथ्र्यो। अभिनय गर्दै जाँदा अभिनय त जीवनको भोगाई अभिव्यक्त गर्नुरहेछ भन्ने महसुस गरेँ त्यसैले सायद जीवन्तता देखिएको हो कि?
‘झुम्कीबाट रिष्माले कबड्डीकी मैयाँको परिचय फेर्छिन्’
अपिल विष्ट, काठमाडौं, असोज ४ - अपिल विष्टका चिकित्सन बाबु उनलाई छोराले आफ्नै बाटो समातोस भन्ने चाहाना थियो तर त्यस्तो भएन्। उनलाई फिल्म क्षेत्र मनपर्‍यो। सुरूमा रहरले लागेको भएपनि पछि यसैले खिच्दै गएपछि उनले मुम्बई गएर जी स्टुडियो अफ मिडिया आर्टसमा फिल्म निर्देशन पढे। फिल्म निर्देशनपछि उनी सिधैं निर्देशक बनेनन्। उनले लोकप्रिय जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय जिप दुर्घटनामा आधारित 'दासढुङ्गा' र अष्ट्रेलियाका साथीहरूसँग मिलेर 'ऋतु' फिल्मको निर्माण गरे।
अशेष अधिकारी, काठमाडौं, भदौ २४ - ‘दसैं आउन लागेको थियो तर घर जाने बस भाडा थिएन। काठमाडौं बसेकी, घरमा केही ल्याउँछे कि भन्ने आश हुन्थ्यो। गाडीभाडा थिएन, कहाँबाट अरू चिज किन्ने पैसा हुनु,’ उनले भनिन्। यस्तो भएपछि त्यो साल दीपाले बाबुलाई ढाँटिन्, ‘बुबा यहाँ कामले भ्याइनभ्याइ भो यसपटक घर नआउने भएँ।’ विस्तृतमा
समुन्द्र राज घिमिरे, काठमाडौं, भदौ २३ - भलिबल खेलाडी सिपोरा गुरुङले ‘घलेकः द साइन अफ लभ’ र ‘यम्फावतीः द प्रिन्सेस’ मा अभिनय गरिसकेकी छन्। उनको तेस्रो फिल्म ‘भुइँमान्छे’ रिलिजको तयारीमा छ। भन्छिन्, ‘म पहिलोपटक नेपाली फिल्ममा खेल्न लागेको होइन, यसअघिका दुइटै फिल्म नेपाली हुन्। काठमाडौंमा बनेको फिल्मलाई मात्र किन नेपाली भनिन्छ? पोखराबाट खेल्ने खेलाडी राष्ट्रिय हुने, पोखराबाट बन्ने फिल्मचाहिँ किन नहुने? हामी आफैं स्पष्ट बोल्न हिचकिचाइरहेका छौं।’
'यहाँ पीर बिसाउनै गाह्रो छ'
छातीमा अलि समस्या छ। दुईचार वर्ष भइसक्यो, संगीतमा निस्क्रिय भएको। धेरैले गाउनुपर्यो भनेर भनिरहेका छन् तर उनीहरुलाई म बिरामी भएको थाहा छैन। म संगीतमा फर्कन्छु। पहिले केही गीतहरु रेकर्डिङमा छुटेकाले अलि असन्तुष्ट छु। बाँकी त मेरो जुन लोकप्रियता छ, त्यसदेखि त म सन्तुष्ट नै छु।